कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै दुई जना सम्पर्कविहीन, किन भागे उनीहरु ? — Sanchar Kendra
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै दुई जना सम्पर्कविहीन, किन भागे उनीहरु ?
बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएका दुई जना सम्पर्कविहीन बनेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका हुन् । शुल्क तिरेर गरिने परीक्षणका लागि उनीहरुले शुक्रबार स्वाब दिएका थिए ।
पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्क बाहिर गएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताए । उनीहरुले आनो ठेगाना बुटवल वडा नं. ६ र सम्पर्क नम्बर एनसेलको मोबाइल नम्बर टिपाएका थिए । नतिजा पोजेटिभ आएको भन्ने पहिलो कल रिसिभ गरेका उनीहरुसँग त्यसपछि सम्पर्क नहुने नसकेको डा. गिरीले बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई खोजीका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । प्रयोगशाला प्रमुख डा.गिरीका अनुसार उनीहरुले भारतबाट आएको र पुनः भारत जानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन आएको बताएका थिए । यस्तै पर्साको विरगञ्जमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
एक महिलाको शुक्रबार राति मृत्यु भए पनि शनिबार मात्र अस्पतालले जानकारी दिएको हो भने अर्की एक महिलाको शनिबार साँझ मृत्यु भएको हो। वीरगञ्ज-१६ नगवा बस्ने ६० वर्षीया महिलाको शनिबार साँझ ६ बजे मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
डा. मदन उपाध्यायले खबरहसँग भने, ‘बयोधा अस्पतालबाट नारायणी कोरोना विशेष अस्पतालमा लैजाने क्रममा शनिबार साँझ थप एक जना महिलाको मृत्यु भयो । उहाँको हिजो कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएकोमा आज मात्र रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।’
यसअघि हिजो मृत्यु भएकी ५० वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु पछि मात्रै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । नारायणी बयोधा अस्पतालमा मृत्यु भएकी वीरगञ्ज-१६ नगवाकी ५० वर्षीया महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका डाक्टर निरज सिंहले पुष्टि गरेका हुन ।